Wararkii ugu dambeeyey ee Tukaraq & Ciidamada Somaliland oo duulaan isku diyaariyey – Puntlandtimes
Wararkii ugu dambeeyey ee Tukaraq & Ciidamada Somaliland oo duulaan isku diyaariyey
GAROWE(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa galabta degan, kadib dagaalkii saaka ka dhacay deegaankaasi.
Inkastoo dhaq dhaqaaqyo ciidan laga dareemayo deegaanka ayaa waxaa hadana dhinac socda qorshe duulaan ah oo ay wadaan saraakiisha ciidamada Somaliland, kuwaas oo ku wajahan dhanka Puntland.
Deegaano dhowr ah oo dhaca duleedka magaalada Garowe ayaa bartilmaameedka ciidamada lagu sheegay, waxaana tan iyo saaka socday rugaansi ay wadaan ciidamada Somaliland oo hore uga soo guuray deegaankii lagu wada dagaalamay amaba habeenkii xalay ahayd lagu weeraray ciidamada Somaliland.
Arintani ayaa ka dambaysay kadib markii taliska ciidamada Somaliland amar kasoo baxay ciidamada Somaliland lagu siiyey in ay ruqaansadaan dhanka deegaanka God Qaboobe si ay uga tagaan weeraro kasta oo kasoo wajaha ciidamada Puntland iyo jabhadda xoreynta gobolka Sool oo weerar xalay lagu qaaday ciidamada Somaliland ka dambaysay.
Dhanka degmada Boocame ee gobolka Sool deegaano hoostaga ayaa waxaa loo diray ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland, waxaana arintaasi laga yaabaa in ay sababto dagaal toos ah oo ka dhex qarxa ciidamada Somaliland iyo Puntland.
Dhawaan ayey ahayd markii Muuse Biixi hor joogayaal u tagay uu siiyey 300 oo askari, kuwaas oo laga qori doono deegaano hoostaga Boocame.
Gaas baa xoogaa idiin soo diray si reer Puntland u niyad jebisaan.
Adeer iidoor wagaashe maalmo baa u haray.
bashiir axmed says:
beenta iska daaya oo dhibaatada dadka ka daaya
Wax puntland la yiraahdo ma jiraan umadda ku nool waqooyi waa wada dawlada barakaysan ee soomaaliland